दुई वर्ष देखि कुनै पुरुषको नजिक नै नपरेकी यि महिला कसरी भइन् गर्भवत ? त्यसपछि मानिसहरु यसको पछाडिको कथा जान्न चाहन्थे ! « गोर्खाली खबर डटकम
एजेन्सी । एक महिलाले गर्भावस्था को बारेमा अचम्म लाग्दो कुरा सार्वजनिक गरेकी छन् । ती महिला भन्छिन् कि उनी विगत दुई बर्षदेखि कुनै पुरुषसंग वे ड शे’यर गरेकी छैनन् । उनी एक्लै बस्दै आएकी छन् तर जब उनी डाक्टरकहाँ परिक्षणको लागी गइन्, डाक्टरले र ग त परीक्षणको हेरेर उनलाई गर्भवति भएको बताए ।
‘द सन यूकेमा प्रकाशित समाचार अनुसार एक ब्रिटिश युवती सामन्था गि ब्स नले टिकटकमा एक भिडियो जारी गरेर एक आश्चर्यजनक कुरा सुनाएकी हुन् । उनी भन्छिन् कि जब उनी र ग त परीक्षणको लागी डाक्टरकहाँ गइन्, डाक्टरले उनलाई गर्भवती भएको बताए। म यो सुनेर स्त ब्ध भएको थिएँ किनकि यो एक बर्ष भन्दा बढी भएको थियो म कसैसंग नजिक भएको छैन ।
सामन्था गि ब्स नका अनुसार पुरुषको नजिक नै नपरेकी भएपनि डाक्टरहरुले उनलाई गर्भवती घोषित गरे। समाचारका अनुसार सामन्थाको यो भिडियो टिकटकमा १० लाख भन्दा धेरै पटक हेरिएको छ। भिडियो हेरेर, जब मानिसहरु यसको पछाडिको कथा जान्न चाहन्थे, सामन्थाले अर्को भिडियो सेयर गरिन्, जसमा उनले भनिन्, ‘हुनसक्छ डाक्टरहरुले ग ल्ती ले उनको र ग त परीक्षण रिपोर्ट साटिएको होला ।
सामन्थाका अनुसार, ‘केहि दिन पहिले म एक र ग त परीक्षण को लागी डाक्टरकोमा गएं मलाई च’क्कर लागेको थियो, पेट दुखाइ पनि थियो। मेरो र ग त परिक्षण गरीएको थियो, जस पछि डाक्टरले जे भने त्यो मलाई अचम्म बनायो। सामन्थाले डाक्टरलाई भनिन् कि म गर्भवती हुन सक्दिन किनकि म लगभग दुई बर्ष यता पुरुषको नजिक नै परेकी छैन । जसमा डाक्टरले अर्को टे स्ट को बारेमा कुरा गरे, तर आज सम्म उनले यसको नतिजा बताएनन्। अब सामन्था फेरी उही डाक्टरकहाँ जाँदैछिन् ।